epitome ee sharafta iyo raaxada waxaa duulaya gaarka ah. Ma jiraan wax sida quruxda badan sida arrimaha gudaha ee jet gaar ah waa. Waa dheeraad ah oo cajiib badan gudaha guryaha raaxada iyo yachts ugu. A qol heer sare raaxo leh ilaa Spice doonaa safarka diyaaradiisa khaaska ah.
Taajirka iyo caanka ah si gaar ah u soo duuli. caanka ah Hollywood, siyaasiyiinta, iyo madaxda ugu sareysa ganacsatada door bidaan adeegga charter jet light in safarka airline. Haddii aad jeceshihiin wax wanaagsan nolosha, aad jeclaan doonaa safarka diyaaradiisa khaaska ah.
Dayuurada gaarka loo leeyahay waa raaxo. adeegga charter jet Light kuu soo bandhigi doonaa raaxo kasta hubaal. Waxaad heli doontaa shaqaale ah oo dhan ee aad adeegga. Waxaad ku raaxaysan doonaa cuntada ugu fiican iyo madadaalada.
Top soo saarida
Waxaa jirta sabab ah sababta oo dhan madaxda sare waxaa duulaya gaarka ah. Waa sababtoo ah waxay doonayaan in ay sii joogaan wax soo saar leh halka safraya. Waxaad ma noqon karaan wax soo saar ee airline ah xataa haddii aad duulaya jet heer-galo ama jet shakhsiyeed. La'aanta gaarka ah iyo qarsoodinimada ka dhigi doonaa in aan idin soo dhowayn oo ku baaqay in ganacsiga muhiim ah marka aad la isticmaalayo airline ah.
Haddii aadan haysan raaxada si ay u fadhiisan oo aan waxtar lahayn inta lagu guda jiro duulimaad 13-saacadood ah, aad u baahan tahay adeeg charter jet light. Iyada oo ka duwan this, aad qabto wax walba oo aad u baahan tahay si ay u ilaaliyaan wax soo saarka ugu sarreysa. Jawiga xasilloon oo degan ee jet gaar ah waa in ay faa'iido weyn. Intaa waxaa dheer, awood u leh inay ka shaqeeyaan oo ay wacaan oo aan indhaha u dusaya shisheeyayaal waa lagu daray weyn.
Waxba Beats Travel Jet Private
Marka aad u leenahay diyaarad oo dhan naftaada, waxaad ka heli wax ka badan top-uruursanayey raaxo. Waxa kale oo aad ku raaxaysan doonaa sahlanaato qabanin iyo dabacsanaanta. Waxaad ma adkaysan doonaa safaf dhaa-dheer ama duulimaad dib. Iyada oo adeeg aad u iftiin jet charter, aad tahay mas'uul ka ah wax kasta oo. Waxaad u yeerin marka diyaaradda waa tagaan iyo meesha ay tahay in dalka. Buugga adeegga charter diyaaradaha microjet hadda! inay qaataan waayo-aragnimo aad safarka hawada heerka ku xiga.
Nooca Jet Light:
madoobaad 500 (VLJ)